असत्यको सामू कहिल्यै आत्मसर्मपण गर्दिन् र तर्सिन पनि तर्सिन्नँ – सांसद शर्मा | Hakahaki
असत्यको सामू कहिल्यै आत्मसर्मपण गर्दिन् र तर्सिन पनि तर्सिन्नँ – सांसद शर्मा
१६ फागुन ०७६, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद जनार्दन शर्माले श्वेतपत्रमा आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमार्फत् सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद शर्माले सरकारलाई दलालहरूको घेराबाट बच्न र संविधानसम्मत अघि बढ्न सल्लाह दिँदा उल्टो श्वेतपत्रमा आफ्नो नाम जोडिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारसँग जवाफ मागेका हुन् ।
“म जवाफ चाहन्छु, रक्षामन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ चाहन्छु, सरकारबाट जवाफ चाहन्छु” सांसद शर्माले भने, “योे श्वेतपत्र हो कि अश्वेपत्र हो ?”
संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लेखिएको र त्यतातिर बढ्नका लागि, रोगीले सम्पूर्णरुपले उपचार पाउनका लागि, रोजगारी गर्न सरकारलाई बारम्बार सुझाव राख्ने गरेको बताउँदै सांसद शर्माले भने, “सरकार दलालहरूको घेराबाट बच्नु पर्छ ।”
सरकारले आफूलाई आत्मसमर्पण गराउन, तर्साउन श्वेत पत्रमा त्यस्तो लेखिएको भए आफूले आत्मसर्मपण नगर्ने र नतर्सिने समेत शर्माले बताएका छन् ।
“यहाँ मलाई तर्साउन खोजिएको हो ? वा, मलाई आत्मसर्मपण गराउन खोजिएको हो ? सांसद शर्माले भने, “म सत्यको अगाडि असत्यको सामू कहिल्यै पनि आत्मसर्मपण गर्दिन् र तर्सिन पनि तर्सिन्नँ ।”
सांसद जनार्दन शर्माको सम्बोधनको पूर्णपाठ :
सम्मननीय सभामुख महोदय,
सरकारले दुईदिन अगाडि एउटा श्वेत पत्र जारी ग¥यो । श्वेत पत्र भनेको के हो ? मलाई थाहा छैन् । सायद कुनै विषयमा जस्ताको तस्तै कुरा जनता सामू ल्याउनका लागि श्वेत पत्र जारी हुन्छ होला भन्ने मैले बुझेको थिएँ । यो श्वेत पत्रमा मैले मिडियाबाट थाहा पाएँ कि मिडियामा फलना–फलना–फलना पनि यो जग्गा बेच्न लागे; के के गर्न लागे, लिजमा दिन लागे भनेर लेखिएका कुराहरू मैले पढेँ । त्यो पढिसकेपछि तथ्य के होला ? भनेर खोज्न ट्रष्टको कार्यालयमा गएँ । ट्रष्टको कार्यालयमा त्यहाँ माइन्युटमा के लेएिको छ, तथ्य कुरा हेर्न मैले चाहेँ; निवेदन दिएँ । तर, हेर्न दिइएन् । ताल्चा लागेको छ, खोल्न मिल्दैन भनियो । निवेदन दिएर मैले हेर्न पाउँ भन्दा पनि दिइएन ।
अनि मैले त्यहाँ कर्मचारी साथीहरूसित सोधेँ, ‘मेरो नाउँ पनि आयो’ । यो ट्रष्टको कार्यालयमा म गृहमन्त्री हुँदा कहिल्यै पनि पसेको थिएन, आज आएँ । तर, कसरी आयो मेरो नाम ? भनेर मैले प्रश्न गरेँ । होइन, हामीले त हजुरको नाम छैन्, उहाँले मिटिङ्ग गर्नुभएको छैन् भनेरै भनेका थियौं । भनेकै कुरा त्यही हो । कुनै निर्णय भएको छैन्, उहाँको पालामा भनेर हामीले भनेको हो हजुर, त्यही हो सत्य कुरा भनेर त्यहाँको कर्मचारी साथीहरूले भन्नुभयो ।
मैले मुख्य सचिवलाई पनि सोधेँ । मुख्य सचिव, अहिलेको मुख्य सचिव म गृहमन्त्री हुँदा मेरो सचिव हुनुहुन्थ्यो, गृह मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई सोधेँ, ‘मुख्य सचिवज्यू, त्यो नाम कसरी त्यहाँ लेखियो त ? केही निर्णय भएको थियो त ? तपाईं नै सचिव हुनुहुन्थ्यो । केही निर्णय गराउनु भएको थियो ? मैले थाहा नपाएर कतै सही भयो कि ! भनेर सोधेँ ।’
‘होइन् हजुर, यो विवरण झुटा हो, यो बिल्कुलै झुटा हो । हजुरको पालमा पनि भएन र अरु माननीयको पालामा पनि भएन ।’ भनेर उहाँले भन्नुभयो । अनि म आश्चर्यमा परेँ ।
यो श्वेतपत्र हो कि अश्वेपत्र हो ? मेरो प्रश्न सभामुख महोदय । यो श्वेतपत्र हो भने जस्ताको तस्तै आउनु प-यो, अश्वेत हो भने मान्ने कुरा भयो ।
त्यसकारणले यहाँ (श्वेतपत्र)मा के भनिएको छ भने २०७४ कार्तिक १३ गते निर्णय भएको भनेर मेरो नाम समेत त्यहाँ जोडिएको छ । यो श्वेत पत्र भन्ने किताबमा २०७४÷०७÷१३ गते थार्म सेकुर प्रा.लि.को आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको र तत्कालिन नेपाल ट्रष्टमा संरक्षक सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गहमन्त्री माननीय जनार्दन शर्मा भनेर भनिएको छ । हामीले गरेको भन्ने हिसाबले त्यो अर्थ लाग्ने लेखिएको छ ।
त्यसलाई आधार मानेर पत्रिकाहरूले, अनलाइनहरूले त फलना–फलना पनि सहभागी भएको भनेर लेखे । यो कुरा मैले अरुमा हेरेँ । भखैरै, अस्ति भएको निर्णयमा हेरेँ । त्यहाँ पनि यसरी नाम लेखिएको, मिति लेखिएको छ कि भनेर हेरेँ । त्यहाँ लेख्दा के लेखिएछ भन्दाखेरि नाम लेखिएनछ । जस्तो पछिल्ला निर्णहरू छन् नि, रिसोर्टहरू आदिआदिको निर्णयहरूमा लेख्दाखेरि यति गतेको, यति–यति डटडट, डटडटको मितिमा निर्णय भएको मात्रै लेखिएको छ । नाम छैन् फेरि त्यहाँ । नाम कहीँ लेख्न पर्ने, कहीँ लेख्न नपर्ने ? लेख्नुपर्दा पनि त्यो कार्तिक १३ गते होइन् । असोज ३० गतेबाट म गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटेको छु । असोज ३० गते नै मैले पत्रकार सम्मेलन गरेँ र म बिना विभागीय जिम्मेवारीमा पठाइएको छु । म मन्त्री नै छैन । म मन्त्री नै नभएको मान्छेलाई जबर्जस्ती नाम लेखिने कुरा र कर्मचारीहरूले भनेको कुरा, ‘छैन हजुर, उहाँको नाम छैन्’ भन्दा भन्दै नाम लेखिनुको कारण के हो ? किन लेखियो र लेख्नुपर्ने नाम किन लेखिएन ? त्यसकारण, यो श्वेत पत्र होइन, अश्वेत पत्र हो भन्ने मलाई लागेको छ ।
यो अश्वेत पत्र किन लेखियो भनेर मैले बुझ्दाखेरि मैले गलत कुरा त भनेको छैन् अहिलेसम्म । तर, मैले २÷४ वटा कुरा बोलेको छु । के बोलेको छु भन्दाखेरि, म राज्य व्यवस्था समितिमा पनि सभामुख छु, सभामुख महोदय । राज्य व्यवस्था समितिमा कतिपय ऐनहरू आउँछन्, जुन ऐन संविधानको स्प्रीटभन्दा बाहिर छ, हुन्छन्, संविधानभन्दा बाहिर आएको ऐनहरूलाई संशोधनको स्प्रीटले मिलाउनु पर्छ भनेर अरु माननीयसहित म पनि बोल्ने गर्छु । परिमार्जन गर्न म पनि लाग्ने गरेको छु । कतिपय ऐनहरू हामीले त्यसरी सच्याएर पनि पठाएका छौं र यही सम्मानीत सदनले पारित पनि गरेको छ । एउटा कुरा मैले गरेको भनेको त्यही हो ।
दोस्रो कुरा, मैले यो देशमा समृद्धिको लागि पहिला भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ । सरकार दलालहरूको घेराबाट बच्नु पर्छ भनेर मैले सरकारलाई सपोर्ट गर्नका लागि आग्रह अनुरोध गर्ने गरेको छु । र, दलालहरूको घेराबाट मुक्त नभएसम्म यो अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा मैले गरिरहेको छु । त्यो कुरा जनतामा विकास र निर्माणको अपेक्षा तीब्र छ । नेपालमा यतिबेला त्यो तीब्र विकासको अपेक्षाको एउटा कामचलाउ तरिकाले हुँदैन्, तीब्र गतिमा अघिबढ्नु पर्छ भनिरहेको छु । सरकारलाई तीब्र गतिमा अघिबढ्नु पर्छ, बिस्तारै बढेर सम्भव छैन् भनिरहेको छु ।
मौलिक अधिकारको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भन्ने लेखिएका छन् । त्यतातिर बढ्नका लागि, रोगीले सम्पूर्णरुपले उपचार पाउनका लागि अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ, रोजगारी सृष्टि गर्न सक्नुपर्छ, कृषिलाई आधुनीकीकरण गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट औधोगिकीकरण गर्न सकिन्छ भनेर बारम्बार सुझाव राख्ने गरेको छु ।
यहाँ मलाई तर्साउन खोजिएको हो ? वा, मलाई आत्मसर्मपण गराउन खोजिएको हो ? म सत्यको अगाडि असत्यको सामू कहिल्यै पनि आत्मसर्मपण गर्दिन् र तर्सिन पनि तर्सिन्नँ । त्यसकारणले यहाँ (श्वेतपत्रमा) जसरी यो कुरा लेखियो । सरकारले मलाई त ढाँट्न सक्ला तर जनतालाई ढाँट्न सक्छ ? मतदातालाई ढाँट्न सक्छ ? किमार्थ सकदैन् ।
कसरी विश्वास गर्ने सभामुख महोदय ? विश्वासको संकट प¥यो यहाँ । विश्वासको संकट हुने गरी यहाँ विषयहरू कि राखियो ? किन लेखियो ? कतिपय लेख्नु पर्ने ठाउँमा नलेख्ने, नलेख्नु पर्ने ठाउँमा लेख्ने ? नभएको मान्छेको नाम लेख्ने ? म गृहमन्त्री छैन् नभएको मान्छेको नाम लेखेर मिडियावाजी गर्ने र गराउने कुराहरू किन गरियो ? कर्मचारीहरूले भन्दाभन्दै, मुख्य सचिवले गलत छ भन्दा भन्दै नामहरू किन लेखियो ? त्यसकारण, मलाई शंका उत्पन्न भयो ।
यसको मलाई जवाफ चाहिन्छ । विश्वासको संकट प¥यो र सकारात्मकरुपले सहयोग र समर्थन गरेर अघि बढिरहेको आफ्नै पार्टीको सरकारलाई मद्दत गर्दागर्दै अनि यो विषय, नभएका विषयहरू लेख्नु पछाडिको कारण के छ ? भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनैपर्छ । यहाँ भएका अनियमितता अन्त्य हुनैपर्छ । नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । ऐन कानुन जसरी बनेका छन्, ऐन कनुनको जसरी दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । मेरो यो माग छ । म जवाफ चाहन्छु । रक्षामन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ चाहन्छु । सरकारबाट जवाफ चाहन्छु । धन्यवाद !